Shumaca ur udgoon, Haysta Shumaca, Shamac - Winby
WINBY INDUSTRY & GANACSIGA LIMITED
Shumaca Wax-soo-saarka Xirfadlaha ah Muddo 20 sano ah
Tumbler shumac udgoon
Shumacyada weelka Pudding
Mason jar shumac
Shumaca daasadda ur udgoon
Shumac dhalo khamri ah
Shumac udgoon dhoobo ah
Farshaxannada iyo shumacyada hal-abuurka leh
Dhig hadyad shumaca udgoon
Haysta shumaca dhalada
Tumbler dhalooyinka shumaca
Dhalada khamriga ee shumaca
Weeladaha shumaca ee kale
Haysta shumaca birta
Haysta shumaca dhoobada
Wax shamaca haysta
Dab la'aan udgoon
Qalabka shumaca DIY
Waxyaabaha kale ee shumacyada
Kaabista tayo sare leh oo leh qiime tartan ah ayaa dammaanad u ah
xiriir iskaashi oo waara.
Winby candle waxay leedahay warshad u gaar ah oo soo saarta dhammaan noocyada shumacyada udgoon. Waxaan leenahay khibrado qani ah, tignoolajiyada qaan-gaadhka ah ee suuqa shumaca ku dhawaad ​​20 sano. Sidoo kale waxaan haysanaa koox xirfad leh oo siisa adeega ugu fiican iyo shumac macaamiisheena ka kala yimid aduunka oo dhan.
Waxaan khibrad ganacsi oo wanaagsan u leenahay alaabooyinka soo socda: Shumac dhalada udgoon, nalalka shaaha, shamacyada tiirarka, shumacyada Votive, shumaca xajiya, wicks iyo alaabta kale ee ceeriin ee shumacyada.
Waxaan leenahay naqshadeynta iyo horumarinta waax noo gaar ah, waxaanan siin karnaa adeegga OEM iyo ODM macaamiisha.
Shumaca batiik waa mid aad u deggan oo deegaan ahaan u wanaagsan.
Udgoon badan oo caan ah iyo midabyo qurxoon ayaa la heli karaa.
Waxaan aaminsanahay in tayada badeecada iyo adeeggu ay tahay nafta ganacsiga
si loo caawiyo macaamiisha inay badbaadiyaan miisaaniyada iyo wakhtiga.
Dhuxul Soybean Dabiiciga ah, Wick Shumaca, Wick Bar
weelka shumaca dhalada
OEM waa la heli karaa, Logo la habeeyey, midabka iyo cabbirka
dhalada caado udgoon
Eco-saaxiibtinimo iyo qiiq la'aan
Waxaan leenahay warshad noo gaar ah si ay u soo saaraan shumaca ur udgoon. Waxaa jira boqolaal nooc oo kala duwan oo shumac udgoon.
17oz 500ml weel galaas shamaca dhalo alwaax leh...
Dhalo barafaysan oo raagaya wax dabiici ah oo soy...
Daasadda birta qaaliga ah hadyad shumac dhigay
Horumarinta Caadada Raaxada Soy Wax udgoon shumaca...
Shumac hadiyadeed oo la qaadan karo oo udgoon oo leh dabiici ...
qaabka vanilj yankee qasacad udgoon oo udgoon...
Udugga dabiiciga ah ee shumaca soy ka udgoon
Weelka wax soy-ga raaxada ee caadiga ah shumac udgoon...
Soy wax mason galaas dhalo shumaca votive
Shamaca udgoon galaas soy
weel shamac maran baraf barafaysan
Soo saaraha hadiyadaha shumaca - shumaca farshaxanka GY01...
matte baraf caadadii shamaca cawsduur weel...
Qurxinta Guriga Soy Dabiiciga ah oo udgoon Wax Cube Me...
Qurxinta qurxinta gaarka ah ee soy ca...
Galaas matte baraf maran weelasha dhalooyinka shumaca
Dhuxul soy dabiici ah oo loogu talagalay samaynta shumaca
Weelka shumaca dhalada ee barafaysan oo cad oo cabbir badan leh...
Raaxada madhan weelka shumaca dhalada matte oo leh...
Shiinaha Qiimaha jaban ee Shumacyada Yoga - Natura...
Sida loo hagaajiyo tunnel-ka ee aad jeceshahay...
Kahor intaadan waxba samayn, hubi in tunnelku yahay dhibaatada dhabta ah. Qaar ka mid ah shumacyada u eg inay tunnel-ka ayaa dhab ahaantii la ildaran jeexjeexyada. shumaca u eg in uu tunnel-ka galay laakiin dhab ahaantii ha...
Sida Loo Hagaajiyo Loogana Hortago Tuulada Shumaca
Tunnelka shumaca waa ifafaale shumaca shiday oo ku dhex milmay badhtamaha shumaca iyada oo aan dhalaalin dhammaan shamacyada ku xeeran, taasoo ka tagaysa daraf shamac adag ah oo ku wareegsan weelka. ...
2021 isbeddellada cusub ee shumaca duugista ayaa la bilaabay
2021 isbeddellada cusub ee shumaca duugista ayaa la bilaabay Waxaan bilownay shumaca duugista udgoon ee shumaca SPA ee weelka shumaca dhoobada qaaliga ah, fadlan hoos ka hel qaar ka mid ah shumaca duugista udgoon naqshadeyn cusub, si aad u hesho faahfaahin dheeraad ah ...
Warsidaha Lasoco wixii kusoo kordha
4-E-428, Dooxada Sayniska Awooda, No. 3088 Lekai North Street, Baoding, Hebei, Shiinaha